पक्राउ परेका डा. केसी अदालतमा, समर्थकहरुबाट बिरोध प्रदर्शन
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पौष २५, २०७४
काडमाण्डौ २५ पुस । सोमबार अनसनस्थलबाटै पक्राउ परेका डा गोविन्द केसीलाई बयानका लागि सर्वोच्च अदालत लगिएको छ । अदालत लगिएलगतै अदालतको अबहेलना मुद्दामा पक्राउ परेका केसीसँग सर्वोच्च प्रशासनले बयान लिन सुरु गरेको छ ।
केसीसँग सुरुमा बयान लिने र बयान सकिए अबहेलना मुद्दामा सुनुवाइ सुरु हुने सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ । बयान सकिए आज नै पूरक पेसी सूची सार्वजनिक हुनेछ वा अर्को दिन सुनुवाइ हुनेछ । केसीसँगै कानुन व्यवसायी सुरेन्द्र भण्डारी उपस्थित हुनुहुन्छ । केसीलाई सिंहदरवार प्रहरी वृत्तबाट सर्वोच्च लगिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालत वरपर आज बिहानदेखि नै सुरक्षा कडा गरिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले चार वर्ष पुरानो मुद्दामा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानबाट बर्खास्त गरिएका डिन डा. शशि शर्मालाई पुनर्बहाली गरेको भन्दै केसी सोमबार अपरान्ह ४ बजेदेखि अनसन बस्नुभएको थियो । केसी प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै अनशन बसेलगत्तै अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
यसैबिच अदालत अवहेलनाको मुद्दामा पक्राउ परेका डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् ।
डाक्टर केसी पक्राउको विरोध गर्दै ‘सोलिडारिटी फर डा केसी एलायन्स’को अगुवाइमा प्रदर्शन भएको हो । समर्थकहरुले डा केसीको समर्थनमा प्लेकार्ड बोकेर नारा लगाएका थिए । प्रदर्शनमा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्र, नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा लगायतका नेताहरु पुगी समर्थन गरेका थिए । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले डा. केसीलाई पक्राउ गर्नुको पछाडि ठूलो षड्यन्त्र भएको बताउनुभयो ।
यस्तै कांग्रेसका नेता गगन थापाले डा. गोविन्द केसीलाई अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लाग्छ भने आफूलाई पनि लगाउन चेतावनी दिनुभयो ।विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले डा. केसीले न्यायालयमाथि लगाएको आरोपको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।